မိဘတွေကို ခေါင်းခြောက်သွားစေတတ်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ မေးခွန်း ၁၀ ခု - Lifestyle Myanmar
မိဘတွေကို ခေါင်းခြောက်သွားစေတတ်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ မေးခွန်း ၁၀ ခု
သင့်မျက်နှာက အရေးအကြောင်းတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့အဆီ (၆)မျိုး
အချစ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အစွဲအလမ်းကြီးတဲ့ရောဂါ (OLD)ရဲ့ လက္ခဏာများနဲ့ အကြောင်းရင်းများ
စိတ်ကောက်စရာမရှိရင် ရှာကြံကောက်တတ်တဲ့ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကိုယ့်ရဲ့ Crush ကို ချဥ်းကပ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၃) သွယ် …
ချစ်သူနှစ်ဦးကြား နားလည်မှုလွဲမှားစေတဲ့ အချက်အလက်များ
လူအများစုလွဲမှားစွာ အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေကြသော extroverts တို့ရဲ့ အမူအကျင့်များ
ကျွန်မတို့ချစ်ရသူတွေထက် သူစိမ်းတွေကို ဘာကြောင့် ပိုကြင်နာပြရတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း (၃) ချက်
သင့်ဦးနှောက်အပေါ် တေးဂီတရဲ့ ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
မှိုတတ်နေတဲ့အစားအစာတွေ စားမိရင် ဘာဖြစ်လာနိုင်သလဲ?
ကိုယ့်ရဲ့ relationship က အခြေအနေ ဆိုးရွားနေတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေတဲ့အချက် (၆) ချက်
မိသားစုစုံညီ အပန်းဖြေချိန်လေးကို ပိုပြီးပျော်စရာ ကောင်းလာစေဖို့အတွက် နည်းလမ်း ၅ ချက်
by Naung Naung Lwin
ကေလးေတြစဥ္းစားပုံဟာ လူႀကီးေတြနဲ႔ ကြာျခားတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕စပ္စုတတ္တဲ့ စိတ္က အၿမဲတမ္းအေျဖေတြကို ရွာေဖြေနေလ့ရွိၾကပါတယ္။ မိဘေတြဟာ အရာအားလုံးကိုသိရွိသူေတြအျဖစ္ ယုံၾကည္ေနတာေၾကာင့္ သူတို႔သိခ်င္တဲ့အရာေတြဆိုရင္ မိဘေတြကိုေမးေလ့ရွိၾကၿပီး မိဘေတြေျပာသမွ်ကို လက္ခံယုံၾကည္ထားၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔မိဘေတြက မသိဘူးလို႔ေျပာရင္ေတာင္ သူတို႔သိပ္မယုံၾကည္တတ္ၾကပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကေလးေတြေမးလာတဲ့အခါ ေခါင္းမေျခာက္ေစဖို႔အတြက္ သူတို႔ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
၁။ သားက ဘယ္ကေန ျဖစ္လာတာလဲ
႐ိုးသားစြာေျဖတာေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အေသးစိတ္ေတာ့မေျဖပါနဲ႔
အေဖနဲ႔ အေမဟာ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ခ်စ္တာေၾကာင့္ ဖက္ျခင္းနမ္းျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ရာကေန ဆဲလ္ေတြအခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝၿပီး အေမ့ရဲ႕ဗိုက္ထဲမွာ ကေလးေလးက ႀကီးထြားလာတယ္၊ သားေလးက ငါးတစ္ေကာင္လိုပဲ အေမ့ဗိုက္ထဲမွာ ေရကူးေနရင္း တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာၿပီး ေနရာမဆန္႔ေတာ့လို႔ အေမကအျပင္ကိုေမြးထုတ္လိုက္တာပါ။ ယခုလိုအေျဖမ်ိဳးေျဖရင္ပဲ ကေလးအတြက္ ေက်နပ္ေစပါတယ္၊ လိင္ဆက္ဆံရာကေန ဖိုသုတ္ေကာင္နဲ႔ မမ်ိဳးဥေတြ႕ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေတြ ရွင္းျပဖို႔ မလိုပါဘူး။
၂။ သူတို႔ေတြ ဘာလို႔ျငင္းခုန္ၾကတာလဲ
မိဘေတြျငင္းခုန္ၿပီး ရန္ျဖစ္တဲ့အခါတိုင္း ကေလးမွာအျပစ္ရွိသလို ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာသူတို႔ရဲ႕ မသိစိတ္အတြင္းပိုင္းမွာပါ။ ဒီလိုအေျခအေနအတြက္ ကေလးရဲ႕အမွားမဟုတ္ေၾကာင္းကို သင္ကနားလည္ေအာင္ ေျပာျပရပါမယ္။ လူတစ္ေယာက္က အျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕အျမင္ကို သေဘာမတူတဲ့အခါ ျငင္းခုန္ေလ့ရွိၿပီး ကေလးေတြလည္း ျငင္းခုန္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ မုန္းလို႔မဟုတ္ပဲ ခ်စ္ၾကေၾကာင္းေျပာျပပါ။ ၿပီးေတာ့ အေဖနဲ႔အေမဟာ သားကိုအရမ္းခ်စ္ေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ။
၃။ အဲ့အမ်ိဳးသမီးက ဘာလို႔အရမ္းဝေနတာလဲ
တကယ္လို႔ လူၾကားထဲမွာ သင့္ကေလးက ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့လူတစ္ေယာက္ေယာက္ကို အာ႐ုံစိုက္မိၿပီး ေျပာဆိုမိပါက ကေလးကို ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းတာေတြ၊ ႏႈတ္ပိတ္ဖို႔ေျပာတာေတြ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒီလိုတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းက သူတို႔ရဲ႕အတြင္းစိတ္သည္းမခံႏိုင္ျခင္းကို ႀကီးထြားေစႏိုင္ပါတယ္။
ဒီအစား လူတိုင္းဟာ ေမြးထဲကတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူညီပါဘူး။ တစ္ေယာက္ ရွည္ၿပီး၊ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ပုတယ္၊ ဝတဲ့လူေတြရွိသလိုပဲ ပိန္တဲ့လူေတြလည္းရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြက အရမ္းကိုကြဲျပားတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေနမေကာင္းၾကလို႔၊ တကယ္လိို႔သားကသူတို႔ရဲ႕ကြဲျပားမႈကို ေထာက္ျပရင္ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ နာက်င္ေနတတ္တယ္။ တကယ္လို႔သားသိခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေဖနဲ႔အေမတို႔ သီးသန္႔ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွ ေမးတာေကာင္းတယ္။
၄။ မမနဲ႔သားကို ဘယ္သူ႔ကိုပိုခ်စ္လ
မိဘတိုင္းက သူတို႔သားသမီးေတြကို ညီတူညီမွ် ခ်စ္တတ္ၾကပါတယ္။ အျခားကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမာင္ႏွမအေၾကာင္းကို ဘယ္ေတာ့မွဉပမာေပးၿပီးမေျပာပါနဲ႔။ သူတို႔ဘယ္ေလာက္ပဲ ေအာင္ျမင္မႈက်ရႈံးမႈေတြ ရွိပါေစ။ သားကအမနဲ႔မတူေပမယ့္ အေမတို႔ရဲ႕ကေလးေတြျဖစ္ေနလို႔ အတူတူပဲခ်စ္ပါတယ္။ သားကအေဖနဲ႔အေမကို ခ်စ္တဲ့ပမာဏေလာက္ အေမတို႔ကလည္းခ်စ္ပါတယ္။ သားအမကိုလည္း အေဖနဲ႔အေမကိုခ်စ္သလိုပဲ ခ်စ္ရမယ္ေနာ္။
၅။ ဆရာဝန္က သားကိုနာေအာင္လုပ္မွာလား
ဆရာဝန္ဆီသြားတာ သူတို႔အတြက္ေၾကာက္စရာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုကုသမႈဟာ ပိုက်န္းမာဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့အရာျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးေတြကို အခ်ိန္ေပးၿပီးရွင္းျပဖို႔လိုပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ သူတို႔ကိုယခုလိုေျခာက္လွန္႔ထားတာေတြ၊ ရယ္စရာလုပ္တာေတြ မေျပာမိပါေစနဲ႔။
ဆရာဝန္ကသားကိုနာေအာင္လုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကသားမွာရွိတဲ့ မေကာင္းတဲ့ပိုးမႊားေတြ ဖ်ားနာတာေတြကို ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေပးမွာပါ။ အေမလည္းေနမေကာင္းျဖစ္တုန္းက ဆရာဝန္နဲ႔ေဆးထိုးလိုက္တာ ေပ်ာက္သြားတယ္။ သားကသတၱိရွိတဲ့ကေလးျဖစ္လို႔ ေဆးထိုးခံလိုက္ရင္ ခဏေလးေနေကာင္းသြားမွာပါ။
၆။ သားေသမွာလား အေမေရာေသမွာလား
ေသျခင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ကေလးကို လိမ္တာဟာ မေကာင္းပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ႐ုတ္တရက္ေသဆုံးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ကိုအမွန္တရားကို လက္ခံလာႏိုင္တဲ့အထိ ရွင္းျပဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီကမာၻေပၚမွာ အသက္ရွင္ေနတဲ့အရာအားလုံး ေသၾကမွာပါ။ ဒီေန႔သို႔မဟုတ္ မနက္ျဖန္လည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါဟာ ေလာကသဘာဝတရားျဖစ္ပါတယ္။ အေဖနဲ႔အေမလည္း တစ္ေန႔ေတာ့ေသမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အရမ္းမေစာပါဘူး။ တကယ္လို႔ ဖ်ားနာတာေတြမရွိရင္
အရမ္းအိုသြားတဲ့အခ်ိန္ေရာက္မွ ေသရမွာပါ။ သားလည္းအသက္ႀကီးလာတဲ့အခါ ေလာကထဲကထြက္သြားရမွာပါ၊ ဒါေပမယ့္ သားမွာ သားသမီးေတြ၊ ေျမးျမစ္ေတြနဲ႔ သားဘဝရဲ႕ ေကာင္းတဲ့အမွတ္တရေတြ က်န္ခဲ့မွာပါ။
၇။ သားကိုထားၿပီး ဘာလို႔အလုပ္သြားတာလဲ
အလုပ္ကအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေပမယ့္ သင္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကေလးကိုသတိရေနေၾကာင္း သင့္ကေလးယုံၾကည္ဖို႔လိုပါတယ္။ အေမအလုပ္ကို မသြားမျဖစ္ဖို႔ သြားရတာပါ။ ဒါေပမယ့္ သားကိုမထားခဲ့ခ်င္ဘူး။ အလုပ္ေရာက္ေနတဲ့ တခ်ိန္လုံးသားကိုသတိရေနတာ၊ ဒါေပမယ့္ ညေနဖက္ေရာက္ရင္ေတာ့ အေမတို႔ျပန္ေတြ႕ရၿပီေလ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အလုပ္ထဲေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သားကအေမ့ေခါင္းစည္းႀကိဳးကို သိမ္းထားေပးၿပီး အေမကသားရဲ႕အ႐ုပ္ေလးကို သိမ္းထားေပးရင္ မေတြ႕ရေပမယ့္ အေမနဲ႔သားနဲ႔အတူတူေနသလိုပါပဲ။
၈။ အေမၾကေတာ့လုပ္လို႔ရၿပီး သားကိုဘာလို႔ခြင့္မျပဳတာလဲ
ကေလးေတြကို သတိေပးတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးသင္မွားတာရွိရင္လည္း ဝန္ခံသင့္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ အေဖေနာက္က်တဲ့အထိ ကြန္ျပဴတာေရွ႕မွာထိုင္ၿပီး ေဆးလိပ္ေတြေသာက္ေနတာကိုေတြ႕လား၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အေဖအမွားေတြလုပ္မိခဲ့လို႔ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အေဖ့ရဲ႕မေကာင္းတဲ့အရာေတြကို အတုမခိုးဖို႔သားကိုေျပာတာေပါ့။ အေဖကအေဖ့ရဲ႕မေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြကို ေဖ်ာက္ၿပီးပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ေနပါၿပီ၊ မေကာင္းတဲ့အရာေတြကို အတုမခိုးပါနဲ႔သားရယ္။
၉။ ကုတင္ေအာက္မွာသရဲႀကီး ေရာက္ေနၿပီး သားကိုစားရင္ေကာ
သင့္ကေလးက သူ႔ရဲ႕ေၾကာက္႐ြံ႕မႈနဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္ကိုေဖာ္ျပလာခဲ့ရင္ သတိထားပါ။ သရဲႀကီးလား၊ အေမ့ကိုသူ႔အေၾကာင္းေသခ်ာေျပာျပပါဦး၊ အေမငယ္ငယ္တုန္းကလည္း သရဲႀကီးကိုေၾကာက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သားရဲ႕အဖြားက ေမွာပညာေပးခဲ့တယ္၊ ဒီရီမုတ္ကို ယူသြားၿပီး ဒီလႈိ႕ဝွက္ခလုတ္နဲ႔ ကုတင္ေအာက္ကိုႏွိပ္လိုက္ သရဲႀကီးေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္။
ကလေးတွေစဉ်းစားပုံဟာ လူကြီးတွေနဲ့ ကွာခြားတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စပ်စုတတ်တဲ့ စိတ်က အမြဲတမ်းအဖြေတွေကို ရှာဖွေနေလေ့ရှိကြပါတယ်။ မိဘတွေဟာ အရာအားလုံးကိုသိရှိသူတွေအဖြစ် ယုံကြည်နေတာကြောင့် သူတို့သိချင်တဲ့အရာတွေဆိုရင် မိဘတွေကိုမေးလေ့ရှိကြပြီး မိဘတွေပြောသမျှကို လက်ခံယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ တကယ်လို့မိဘတွေက မသိဘူးလို့ပြောရင်တောင် သူတို့သိပ်မယုံကြည်တတ်ကြပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေမေးလာတဲ့အခါ ခေါင်းမခြောက်စေဖို့အတွက် သူတို့မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ သားက ဘယ်ကနေ ဖြစ်လာတာလဲ
ရိုးသားစွာဖြေတာကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အသေးစိတ်တော့မဖြေပါနဲ့
အဖေနဲ့ အမေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်တာကြောင့် ဖက်ခြင်းနမ်းခြင်းတွေ ပြုလုပ်ရာကနေ ဆဲလ်တွေအချင်းချင်း မျှဝေပြီး အမေ့ရဲ့ဗိုက်ထဲမှာ ကလေးလေးက ကြီးထွားလာတယ်၊ သားလေးက ငါးတစ်ကောင်လိုပဲ အမေ့ဗိုက်ထဲမှာ ရေကူးနေရင်း တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီး နေရာမဆန့်တော့လို့ အမေကအပြင်ကိုမွေးထုတ်လိုက်တာပါ။ ယခုလိုအဖြေမျိုးဖြေရင်ပဲ ကလေးအတွက် ကျေနပ်စေပါတယ်၊ လိင်ဆက်ဆံရာကနေ ဖိုသုတ်ကောင်နဲ့ မမျိုးဥတွေ့ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အကြောင်း အသေးစိတ်တွေ ရှင်းပြဖို့ မလိုပါဘူး။
၂။ သူတို့တွေ ဘာလို့ငြင်းခုန်ကြတာလဲ
မိဘတွေငြင်းခုန်ပြီး ရန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း ကလေးမှာအပြစ်ရှိသလို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ မသိစိတ်အတွင်းပိုင်းမှာပါ။ ဒီလိုအခြေအနေအတွက် ကလေးရဲ့အမှားမဟုတ်ကြောင်းကို သင်ကနားလည်အောင် ပြောပြရပါမယ်။ လူတစ်ယောက်က အခြားတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်ကို
သဘောမတူတဲ့အခါ ငြင်းခုန်လေ့ရှိပြီး ကလေးတွေလည်း ငြင်းခုန်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မုန်းလို့မဟုတ်ပဲ ချစ်ကြကြောင်းပြောပြပါ။ ပြီးတော့ အဖေနဲ့အမေဟာ သားကိုအရမ်းချစ်ကြောင်း ပြောပြပေးပါ။
၃။ အဲ့အမျိုးသမီးက ဘာလို့အရမ်းဝနေတာလဲ
တကယ်လို့ လူကြားထဲမှာ သင့်ကလေးက ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ကို အာရုံစိုက်မိပြီး ပြောဆိုမိပါက ကလေးကို ဆူပူကြိမ်းမောင်းတာတွေ၊ နှုတ်ပိတ်ဖို့ပြောတာတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီလိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းက သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်သည်းမခံနိုင်ခြင်းကို ကြီးထွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီအစား လူတိုင်းဟာ မွေးထဲကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူညီပါဘူး။ တစ်ယောက် ရှည်ပြီး၊ တစ်ယောက်ကတော့ ပုတယ်၊ ဝတဲ့လူတွေရှိသလိုပဲ ပိန်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ တချို့လူတွေက အရမ်းကိုကွဲပြားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့နေမကောင်းကြလို့၊ တကယ်လိို့သားကသူတို့ရဲ့ကွဲပြားမှုကို ထောက်ပြရင် သူတို့စိတ်ထဲမှာ နာကျင်နေတတ်တယ်။ တကယ်လို့သားသိချင်တယ်ဆိုရင် အဖေနဲ့အမေတို့ သီးသန့်ရှိနေတဲ့အချိန်မှ မေးတာကောင်းတယ်။
၄။ မမနဲ့သားကို ဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်လဲ
မိဘတိုင်းက သူတို့သားသမီးတွေကို ညီတူညီမျှ ချစ်တတ်ကြပါတယ်။ အခြားကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မောင်နှမအကြောင်းကို ဘယ်တော့မှဉပမာပေးပြီးမပြောပါနဲ့။ သူတို့ဘယ်လောက်ပဲ အောင်မြင်မှုကျရှုံးမှုတွေ ရှိပါစေ။ သားကအမနဲ့မတူပေမယ့် အမေတို့ရဲ့ကလေးတွေဖြစ်နေလို့ အတူတူပဲချစ်ပါတယ်။ သားကအဖေနဲ့အမေကို ချစ်တဲ့ပမာဏလောက် အမေတို့ကလည်းချစ်ပါတယ်။ သားအမကိုလည်း အဖေနဲ့အမေကိုချစ်သလိုပဲ ချစ်ရမယ်နော်။
၅။ ဆရာဝန်က သားကိုနာအောင်လုပ်မှာလား
ဆရာဝန်ဆီသွားတာ သူတို့အတွက်ကြောက်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကုသမှုဟာ ပိုကျန်းမာဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်ကြောင်း ကလေးတွေကို အချိန်ပေးပြီးရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ သူတို့ကိုယခုလိုခြောက်လှန့်ထားတာတွေ၊ ရယ်စရာလုပ်တာတွေ မပြောမိပါစေနဲ့။
ဆရာဝန်ကသားကိုနာအောင်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကသားမှာရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့ပိုးမွှားတွေ ဖျားနာတာတွေကို ပျောက်အောင်လုပ်ပေးမှာပါ။ အမေလည်းနေမကောင်းဖြစ်တုန်းက ဆရာဝန်နဲ့ဆေးထိုးလိုက်တာ ပျောက်သွားတယ်။ သားကသတ္တိရှိတဲ့ကလေးဖြစ်လို့ ဆေးထိုးခံလိုက်ရင် ခဏလေးနေကောင်းသွားမှာပါ။
၆။ သားသေမှာလား အမေရောသေမှာလား
သေခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သင့်ရဲ့ကလေးကို လိမ်တာဟာ မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကိုအမှန်တရားကို လက်ခံလာနိုင်တဲ့အထိ ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက်ရှင်နေတဲ့အရာအားလုံး သေကြမှာပါ။ ဒီနေ့သို့မဟုတ် မနက်ဖြန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါဟာ လောကသဘာဝတရားဖြစ်ပါတယ်။ အဖေနဲ့အမေလည်း တစ်နေ့တော့သေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အရမ်းမစောပါဘူး။ တကယ်လို့ ဖျားနာတာတွေမရှိရင်
အရမ်းအိုသွားတဲ့အချိန်ရောက်မှ သေရမှာပါ။ သားလည်းအသက်ကြီးလာတဲ့အခါ လောကထဲကထွက်သွားရမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် သားမှာ သားသမီးတွေ၊ မြေးမြစ်တွေနဲ့ သားဘဝရဲ့ ကောင်းတဲ့အမှတ်တရတွေ ကျန်ခဲ့မှာပါ။
၇။ သားကိုထားပြီး ဘာလို့အလုပ်သွားတာလဲ
အလုပ်ကအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါပေမယ့် သင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကလေးကိုသတိရနေကြောင်း သင့်ကလေးယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်။ အမေအလုပ်ကို မသွားမဖြစ်ဖို့ သွားရတာပါ။ ဒါပေမယ့် သားကိုမထားခဲ့ချင်ဘူး။ အလုပ်ရောက်နေတဲ့ တချိန်လုံးသားကိုသတိရနေတာ၊ ဒါပေမယ့် ညနေဖက်ရောက်ရင်တော့ အမေတို့ပြန်တွေ့ရပြီလေ၊ ဒါ့ကြောင့် အလုပ်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ သားကအမေ့ခေါင်းစည်းကြိုးကို သိမ်းထားပေးပြီး အမေကသားရဲ့အရုပ်လေးကို သိမ်းထားပေးရင် မတွေ့ရပေမယ့် အမေနဲ့သားနဲ့အတူတူနေသလိုပါပဲ။
၈။ အမေကြတော့လုပ်လို့ရပြီး သားကိုဘာလို့ခွင့်မပြုတာလဲ
ကလေးတွေကို သတိပေးတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးသင်မှားတာရှိရင်လည်း ဝန်ခံသင့်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ အဖေနောက်ကျတဲ့အထိ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာထိုင်ပြီး ဆေးလိပ်တွေသောက်နေတာကိုတွေ့လား၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဖေအမှားတွေလုပ်မိခဲ့လို့ပဲ။ ဒါကြောင့် အဖေ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကို အတုမခိုးဖို့သားကိုပြောတာပေါ့။ အဖေကအဖေ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကို ဖျောက်ပြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်နေပါပြီ၊ မကောင်းတဲ့အရာတွေကို အတုမခိုးပါနဲ့သားရယ်။
၉။ ကုတင်အောက်မှာသရဲကြီး ရောက်နေပြီး သားကိုစားရင်ကော
သင့်ကလေးက သူ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖော်ပြလာခဲ့ရင် သတိထားပါ။ သရဲကြီးလား၊ အမေ့ကိုသူ့အကြောင်းသေချာပြောပြပါဦး၊ အမေငယ်ငယ်တုန်းကလည်း သရဲကြီးကိုကြောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သားရဲ့အဖွားက မှောပညာပေးခဲ့တယ်၊ ဒီရီမုတ်ကို ယူသွားပြီး ဒီလှို့ဝှက်ခလုတ်နဲ့ ကုတင်အောက်ကိုနှိပ်လိုက် သရဲကြီးပျောက်သွားလိမ့်မယ်။
တီဗွီဇာတ်လမ်းတွေကို မိသားစုနဲ့အတူတူထိုင်ကြည့်ပြီး အပန်းဖြေရတဲ့ ဖီလင်ကို လူတိုင်းနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိသားစုတိုင်းမှာ တာဝန်တွေ အလုပ်တွေကိုယ်စီနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တစ်နေကုန်စကားမပြောဖြစ်ကြပါဘူး။ ညဖက်ရောက်လာတဲ့အခါ တီဗွီကြည့်ရင်း မိသားစုတွေအကုန် စုစည်းဖြစ်ကြတယ်၊ စကားတွေပြောဖြစ်ကြတယ်။ တစ်နေ့တာလုံး ပင်ပန်းသမျှကို ဇာတ်ကားတွေကြည့်ပြီး အပန်းဖြေဖြစ်တာကြောင့်...
သင့်မှာ ရှေးရိုးစွဲမိဘတွေရှိသလား? သူတို့ကို လိမ္မာပါးနပ်စွာရင်ဆိုင်ဖို့ နည်းဗျူဟာ (၅)ခု
ငါတို့မျိုးဆက်က လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ ပြောတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို တွေ့ဖူးလား? ဒါက ကျွန်မတို့ရဲ့ အဝတ်အစားရွေးချယ်ခြင်း၊ လက်ရှိချိန်းတွေ့ခြင်း ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျွန်မတို့ ရွေးချယ်သော မိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ် (ဒါမှမဟုတ်) ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတို့အမြင်၊ အတွေးအခေါ်တွေကို ကျွန်မတို့မိဘတွေ...
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ဖြစ်ပွားတတ်သော စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်စိတ်ပညာအသင်းမှ ပြုလုပ်တဲ့စစ်တမ်းတခုအရ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဟာ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ လူကြီးတွေထက် စိတ်ဖိစီးမှုပိုမိုများပြားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှု၊ တွေ့ကြုံလာရတဲ့ အခက်အခဲများ စတာတွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရတာဟာ အဆန်းမဟုတ်ပေမယ့် ပိုမိုဆိုးဝါးမှုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တော့ မိဘတွေအနေနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုသည်မှာ အသစ်အသစ်သောအတွေ့အကြုံတွေကို...
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သားသမီးတွေကို ထိရောက်စွာ ဆုံးမပဲ့ပြင်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းများ
ဆိုဆုံးမလို့မရဘဲ အမြဲတမ်းမိဘတွေကို ကန့်လန့်တိုက်၊ ဂျစ်ကန်ကန်လုပ်တတ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်သားသမီးတွေကိုကိုင်တွယ်ရတာဟာ မိဘတွေအတွက် တကယ့်ကို ခက်ခဲပါတယ်။ စိတ်အပြောင်းလဲမြန်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအမြဲလိုချိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့၊ မိဘတွေရဲ့ စေတနာမေတ္တာကို အထင်အမြင်လွဲမှားနေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းကျောင်းပြုပြင်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ အပြန်အလှန်လေးစားမှုမျိုးထားရှိပေးပါ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့...